musha Kanadha Politicians Justin Trudeau Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Justin Trudeau Biography inoratidzira Chokwadi pamusoro pehuhu hwake hwehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Hupenyu Hwemhuri, Vabereki, Mudzimai, Vana, Net Kukosha, Mararamiro uye Hupenyu hwePamoyo.
Kusangana nekutarisira kwako, takagadzirira kuongororwa kwakazara kweHupenyu Hwake Nhau kubva paMazuva Ekutanga kusvika apo Justin Trudeau akazove Akakurumbira.
Iye zvino tarisa zvakanyanya kuti Gurukota reCanada rakawana sei shanduko yekukura.
Hupenyu Hupenyu hwaJustin Trudeau. Ona kukura kwake Hupenyu nekusimuka. Chikwereti: NarCity uye HuffPost.
Zvinopera pasina kutaura kuti zvematongerwo enyika zvakaita basa rakakosha mukuumba nyika sezvatiri nhasi.
Pakati pekuuya kwezvematongerwo enyika muCanada, vashoma varume vakaita saJustin Trudeau vakakwira mukurumbira uye vakava ivo vanoita sarudzo.
Nekudaro, ivo vazvipira uye vanozvipira mabasa kuitira zvakanakira nyika yavo.
Sezvegore ra2020, Justin Trudeau anoramba ari iyo Wechipiri-Mudiki Mudiki Mutungamiriri weCanada. Akashanda semutungamiriri weCanada wechi23 uye akaita zvakakomba zvaungatarisira kubva kune mudiki uye akazvipira munhu.
Iwe haungazvitende kana tikakuudza kuti Justin Trudeau akambove akasiya chikoro. Verenga pamusoro apo isu tichifukunura rumwe ruzivo runonakidza nezve wezvematongerwo enyika weCanada kuburikidza neHupenyu Hwake Nyaya zvakanyatso tsanangurwa pazasi.
Justin Trudeau Childhood Nhau:
Mufananidzo usingawanzoitika wehucheche wemutungamiriri wedu wechi23 wechiCanada. Mufananidzo: HuffPost.
Kutanga kubva, Justin Pierre James Trudeau akazvarwa pazuva reKisimusi, iyo 25 Zvita 1971. Iye akazvarwa kuna amai vake, Margaret Sinclair, nababa vake, Pierre Trudeau kuOttawa Civic Hospital muCanada.
Justin ndiye wedangwe pavana vatatu akazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Sangana nevabereki vaJustin Trudeau- Ona kuti vakanakisa sei kutaridzika kunyangwe mumazera avo ekare. Kunobva: MtlBlog
Nekudaro, mushure mekuparadzaniswa kwemubereki wake, munguva pfupi akazove nehafu-vana vababa kubva kuhukama hwevabereki vake hwakatevera.
Sezvineiwo, mumwe wevanun'una vake, Alexandre Trudeau akazvarwawo pazuva reKisimusi mugore ra1973.
Sezvo baba vaJustin vaishanda seMutungamiriri weCanada mukati memazuva ake ehudiki, ainakidzwa nekushandisa zvese zvakakosha uye zvivakwa chero mwana zvaangade.
Mukomana mudiki haana kushaya kupihwa kupi kweazvino matoyi sezvo vabereki vake vakamupa iye pane zvaaida.
Justin anorondedzera zvakare kushandisa nguva yakakosha naamai vake avo vanowanzo kumuverengera nyaya dzinonakidza.
Justin Trudeau akafananidzirwa pamwe chete naamai vake. Ona kuti anoisa sei pfungwa dzake pabhuku. Zvichida chiratidzo chekutanga chemutungamiri akangwara. Mufananidzo- NarCity.
Justin Trudeau Mhuri Kubva:
Pfungwa uye hunhu hwemutungamiriri wedu weCanada zvinoratidza zvakanyanya marudzi ake emarudzi. Izvo zvakafanira kucherechedzwa kuti Justin Trudeau's Ethnicity anonyanya kuve eFrance neScotland kubva kuCanada nematanho eIrish neDutch Mhuri Midzi.
Kuona maiguru nasekuru vake amai vaibva kuScotland kwaizokupa kugutsikana kuzere kwekuti vazhinji vemhuri yake vaive nezwi rekuScotland.
, isu tese tinoziva kuti Justin Trudeau kune rumwe rutivi anonyatsoziva Chirungu. Kunyangwe zvakadaro, pane mukana mukuru wekuti angave achinyatsogona nemimwe mitauro inotaurwa nevagari veScotland veCanada.
Justin Trudeau Yemhuri Mhemberero:
Sezvineiwo, mudiki Trudeau aisafanirwa kunetseka nezve zvikanganiso zvemari muhudiki hwake. Izvo zvaive zvatove zvakanaka zvakakwana kuti iye akazvarwa mukirasi yakapfuma Yemhuri Nhoroondo, nekudaro ainakidzwa nemari yakakwana yekubhadharwa.
Kuona baba vake vachibata nyaya dzezvematongerwo enyika zvakanaka semutungamiriri weCanada kunofanira kunge kwakakonzera kufarira kwavo zvematongerwo enyika vachiri vadiki.
Sezvineiwo, Trudeau achiri kupa mbiri kuvabereki vake pamwe nekurerwa kwake nekumutsa kufarira kwake zvematongerwo enyika.
Iyo nguva yaaipedza nababa vake semwana mudiki yakakonzera kuda kwake. Ona kuti baba vake vanomubata sei mubhegi.
Kuzvarwa uine kapu yegoridhe hakuna kuvimbisa zvachose Trudeau yekunakidzwa nehupenyu hunofadza pasina matambudziko.
Sezvazvinowanzotaurwa, zvinonetsa muhupenyu hazvife zvakamira, asi zvinoti shandura isu zvakanaka kana zvisina kunaka. Saka zvakare hwaive Hupenyu hwepakutanga hwaTrudeau.
Nehurombo, mukomana mudiki aifanirwa kuenda nevabereki vake kuitisa danho rekurambana aine makore mashanu. Kusiyana nevamwe vana vazhinji, Justin Trudeau akaramba asina hanya nemamiriro ezvinhu sezvaakafumurwa mumhuri yake.
Zvinogona kureva kuti rudo rwake kuvabereki vake runopfuura kutya kutya kuvaona vakaparadzana. Nekudaro, mukomana mudiki angangodaro akaramba akadzikama akatarisana nedambudziko hombe remhuri yake.
Mudiki Trudeau akarererwa pamwe nehama dzake kuRockliffe Park, Ottawa kwaaigara nemhuri yake muStornoway. Zvinonakidza zvakakwana, akashandisa yakawanda yehudiki hwake kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
Kutanga, akatamira kunogara Prime Minister Joe Clark's Harrington Lake. Ipapo akatamira kuNova Scotia kumba kwezhizha uye North Vancouver asati adzokera kuOttawa.
Mwana mudiki akakura aine vanun'una vake vaviri.
Justin Trudeau Dzidzo:
Sezvineiwo, mukomana mudiki akanakidzwa nerombo rakanaka rekusangana neUnited States First Lady, Pat Nixon achiri mukomana mudiki. Kare kumashure, Pat Nixon akamushanyira muchikoro chake chekireshi kuti amutorere chakadhirowewa toy Snoopy.
Asingazive, pfungwa yaTrudeau yakanga yave kutanga kuwana fungidziro yekufungidzira yekupinda munyika yezvematongerwo enyika.
Baba vake pakutanga vaida kumunyoresa pachikoro cheFrench Lycée chakazvimiririra. Nekudaro, amai vaTrudeau vakamugonesa kuti zvaive nani kumuendesa kuchikoro cheveruzhinji. Nekudaro, mudiki Trudeau akazo kunyoreswa kunodzidza kuRockcliffe Park Veruzhinji Chikoro mu1976.
Chikoro cheruzhinji chakapindwa naTrudeau; Rockcliffe Park Veruzhinji Chikoro.
Unoziva here?… Amai vaJustin Trudeau vakadzidzawo paRockcliffe Park Veruzhinji Chikoro kwemakore maviri.
Kutevera kuramwa kwababa vake munaJune 1984, Trudeau haana kutambisa nguva yakawanda paakakurumidza kunyoresa kuCollège Jean-de-Brébeuf kuenderera mberi nedzidzo. Zvinonakidza zvakakwana, baba vaTrudeau vaive alumnus yechikoro chega chaakadzidza.
Justin Trudeau Biography - Yekutanga Basa Rehupenyu:
Mushure mekupedza chikoro chesekondari, Trudeau akaedza kuwedzera kuzvishongedza nedzidzo yepamusoro.
Nekudaro, akanyoresa kunodzidza paMcGill University uye iyo University yeBritish Columbia. Ikoko, akawana bachelor rehunyanzvi degree mumabhuku uye bachelor rezvedzidzo degree zvichiteerana.
Paakapedza kudzidza kuYunivhesiti, Justin Trudeau haana kugara asina basa, asi akatanga basa rake rekutanga basa semudzidzisi.
Zvinoshamisa here? Wedu Trudeau akashanda semudzidzisi mudzidzisi pachikoro chemunharaunda iye achidzidzisa Mathematics neFrench kuWest Point Grey Academy.
Sangana nemudzidzisi wedu wenguva dzose wechikoro akachinja kuve gurukota.
Justin Trudeau Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kuti awedzere basa rake, Trudeau akakurumidza kunyoresa dhigirii ra master mune zvakatipoteredza geography kuMcGill.
Nekudaro, akasiya chirongwa ichi nezvikonzero zvinoverengeka zvemunhu zvakasara zvisina kuziviswa kuruzhinji.
Wedu panguva iyoyo mudzidzisi wechikoro akatanga kutsvaga hofisi yeruzhinji. Akatanga zvishoma nezvishoma kutsigira vavhoterwa vezvematongerwo enyika uye pasina nguva akapinda muparamende muna2008 senhengo yeVamiriri veKupikisa.
Justin Trudeau Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Pasina nguva iri kure, Trudeau akawana rombo rekushandira seye Liberal Party mutsoropodzi we multulturalism uye hudiki. Akabatana pamwe nekukura kwake kwezvematongerwo enyika, akakurumidza kuhwina muna Chivabvu 2011 Canadian federal sarudzo muPapineau.
Sezvineiwo, akapedzisira anyora pasi zita rake mubhuku remukurumbira sezvaakakunda sarudzo yemubatanidzwa ya2015. Nekudaro, akagadzwa muhofisi semutungamiriri weCanada wechi23rd naGavhuna General David Johnston musi wa4 Mbudzi 2015.
Kutaura kwekutanga kwemutungamiriri we23rd weCanada, Justin Trudeau.
Ndiani angadai akatenda kuti mudzidzisi wenguva dzose wekirasi aizozviita zvakakwana kuti ave mutungamiriri anoremekedzwa?
Parizvino, mutungamiriri wedu weCanada akanyatso kupa mipiro mikuru uye masevhisi kuvanhu vakanaka veCanada.
Kungokupa iwe misoro kumusoro pane kumwe kwekuita kwake semutungamiriri, Trudeau akazivisa kudzikiswa kwemitero yevagari vepakati-vagari. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Justin Trudeau Wife uye Vana:
Panguva yekunyora yaJustin Trudeau's Hupenyu Hupenyu, iye anga achingo sangana nemusikana mumwe akazova mukadzi kubva paakasimukira Mukurumbira.
Wedu wezvematongerwo enyika ane mukurumbira wekuCanada akaroora Sophie Gregoire pazuva 28 Chikumi May.
Nyatso tarisa uone kuti vakaroora vakanakisa sei.
Mukadzi wake muCanada redhiyo neTV inomiririra uye akaita basa rakakosha mukubatsira Trudeau kunzwisisa zvizere dudziro yeRudo. Zvinoshamisa kuti, Sophie aigara ari chikamu cheUpenyu hwaTrudeau kubva pamazuva ake eUdiki.
Unoziva here?… Sophie aive shamwari yehudiki uye waaidzidza naye mukoma waJustin Trudeau, Michel.
Zviri pachena kuti vaviri vacho vakasangana ivo pachavo vachiri kukura. Neraki, ivo vakakwanisa kuzvibatanidza zvakare mushure memakore mazhinji apfuura.
Vana vaJustin Trudeau:
Muchato waTrudeau nemukadzi wake Sophie zvakatungamira mukuzvarwa kwevana vavo vatatu anoti; Ella-Grace Margaret, Hadrien Grégoire, uye Xavier James Trudeau.
Panguva yemangwanani eECVID-19 inouraya, mukadzi waTrudeau airatidza mafuru-akaita zviratidzo zvakaita kuti mhuri yake izviparadzanise.
Neraki, musi wa28 Kurume 2020, Sophie akazivisa pachena kuti akapora uye kuti vana vake vane hutano zvakare.
Anowanzofarira kushandisa nguva nemukadzi wake nevana.
Justin Trudeau Hupenyu Hwemhuri:
Vanhu vazhinji vangangofungidzira zviri nyore kuti Hupenyu Hwemhuri hwedu wezvematongerwo enyika ane mukurumbira wekuCanada hwakaomarara.
Chokwadi ndechekuti, Mhuri yaTrudeau inogona kunzwisiswa zviri nyore kana ikabhadharwa zvakakodzera. Pazasi pane nhoroondo izere yevemumhuri yake vese
Nezve Justin Trudeau Baba:
Baba vaJustin Trudeau, Joseph Philippe Pierre Trudeau ndiye munhu wekutanga kupinda mune zvematongerwo enyika mumhuri yaTrudeau.
Akashandawo segurukota regumi neshanu reCanada pamwe nemutungamiri weRiberal Party yeCanada. Makore mashoma mushure mekuzvarwa kwaJustin Trudeau, baba vake naamai vakatanga kuita danho rekurambana.
Hona baba baba vedu mutungamiriri weCanada, Joseph Philippe Pierre Trudeau.
Paairondedzera zvaaifunga nezvehukama hwemubereki wake, Trudeau akataura kuti amai vake nababa vaidanana. Nekudaro, baba vake vaive vakura zvakanyanya kupfuura amai vake saka aisakwanisa kukwana pachinzvimbo chake zvakakwana.
Mushure mekupedza kurambana kwavo, baba vaTrudeau vakatanga hukama hutsva naDeborah Coyne izvo zvakakonzera kuberekwa kwehafu-hanzvadzi yake, Sarah.
Baba vaTrudeau vakaita mumwe mwana naDeborah Coyne.
Nezve Amai vaJustin Trudeau:
Neraki rakaringana, mutungamiriri wedu weCanada akazvikomberedza nehunhu hwakawanda hunoremekedzwa mumhuri yake.
Amai vake, Margaret Joan Trudeau muCanada mutori wemifananidzo, munyori, uye mutambi pamwe newaimbova muterevhizheni anoratidzira mushandi.
Tarisa uone amai vemutungamiriri wedu weCanada, Margaret Joan Trudeau.
Trudeau ainyanya kurerekera kune hunhu hunodakadza hwaamai vake nekudaro anowanzo kunzi mukomana waamai.
Mushure mekurambana kwake kusingadzivisike, amai vaJustin Trudeau vakaroora zvakare Fried Kemper uye akazadza vamwe vana vaviri vanoti; Kyle naAlicia.
Nezve Vanin'ina vaJustin Trudeau:
Justin Trudeau ane vakoma vaviri nevanun'una vatatu. Vakoma vake ndiAlexandre Trudeau naMichel Trudeau nepo vanun'una vake ndiSarah Elizabeth Coyne, Kyle naAlicia Kemper.
Sangana nevanun'una vaviri vaJustin Trudeau; Alexandre (L) naMichel Trudeau (R).
Munun'una wake, Alexander mutori wenhau ane mukurumbira, mugadziri wefirimu, uye munyori. Nehurombo, Justin akarasikirwa nemunin'ina wake mudiki muvhu reAvalanche ra1998.
Chekupedzisira, vana bababa vaJustin Trudeau vakatungamira hupenyu hwakavanzika saka hapana ruzivo rwunozivikanwa nezvavo.
Nezve hama dzaJustin Trudeau:
Achienderera mberi kumadzitateguru aTrudeau, vanasekuru vake baba vaJoseph Charles-Émile Trudeau naGrace Elliott.
Kune rimwe divi, sekuru vaamai vaTrudeau naambuya vake vaive James Sinclair naDoris Kathleen Bernard. Hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve babamunini vaTrudeau nasekuru pamwe nababamunini vake nababamunini.
Justin Trudeau Hupenyu hweMunhu:
Kure nekuedza kwake kwezvematongerwo enyika, mutungamiriri wedu weCanada akabatana zvinoshamisa mukuita zvimwe zviitiko zvinonakidza.
Pane imwe nguva, Trudeau akapinda mumutambo wetsiva wetsiva panguva yechiitiko chekutsvaga mari yekutsvaga kenza. Tsitsi dzake uye kushingairira kuponesa varwere vegomarara kwakaratidzirwa mukuita kwake panguva yechiitiko icho paakakunda Senator Patrick Brazeau.
Unoziva here?… Wezvematongerwo enyika wedu ane mukurumbira anowanzo shanyira nzvimbo yekurovedza muviri kuti agare akagwinya. Pamusoro peizvozvo, anga achigara achiratidzira huwandu hwakawanda hwekufarira kusvetuka kwe bungee, kuchena kwemvura kukwirisa, uye kusvetuka kwechando.
Justin Trudeau Mararamiro:
Iyo Net Kukosha kwaJustin Trudeau yakafungidzirwa kunge iri mari inokwana yemamiriyoni gumi nematatu panguva yekunyora iyi Biography.
Trudeau ave achikwanisa kuunganidza huwandu hwakadai hwehupfumi nekuda kwekushingairira kwake uye kuzvipira kune ake ezvematongerwo enyika.
Makore matatu mushure mekukwira muhofisi yemutungamiriri, Trudeau akaendesa mhuri yake kuimba yake yekugara.
Imba iri pa24 Sussex Drive muOttawa yakanyatsogadzirirwa nemidziyo yekuchengetedza. Nekudaro, ndiyo imwe yenzvimbo dzakachengeteka kwaari kuti agare nemhuri yake.
Tarisa uone pekugara kwaTrudeau pa24 Sussex Drive muOttawa.
Wechidiki wezvematongerwo enyika anorarama hupenyu hwepamusoro. Sezvineiwo, akagara nhaka yeimwe yababa vake yaanokoshesa; 1960 300 Mercedes-Benz XNUMXSL. Sezvineiwo, Trudeau zvakare ane akawanda emota dzemhando yepamusoro mumota yake yekuunganidza.
Trudeau anoratidza ake 1960 Mercedes-Benz 300SL.
Justin Trudeau Untold Chokwadi:
Kuputira Hupenyu hwaJustin Trudeau Hupenyu Huno, heano zvinhu zvishanu zvisinganyanyo kuzivikanwa izvo zvaizokubatsira iwe kuti unzwisise zvizere nezve rake Biography.
Chokwadi # 1: Mhedzisiro yeAvalanche Landslide:
Imwe yenjodzi dzisingakanganwike dzakawira Justin Trudeau kwaive kufa kwemunun'una wake, Michael Trudeau muAvalanche Landslide musi wa13 Mbudzi 1998.
Kusuruvara uye kushaya simba kwakasara mumoyo waTrudeau nechiitiko chakasuruvarisa ichi chinoramba chiri chitsva chakanyorwa mundangariro yake.
Mumwedzi waNyamavhuvhu 2000, Trudeau akafamba rwendo kuCreston, Canada kunopinda Kokanee Summit. Mukuremekedza munun'una wake uye nevamwe vaakavharika, Trudeau akatsigira zvikuru mari yekugadzirisa yakarongeka panguva yemusangano.
Chokwadi # 2: Kurwisana naDonald Trump:
Kutevera kusarudzwa kwake muhofisi muna 2016, Donald Trump akatsvaga kutanga kurambidzwa kwekufamba kwenyika dzeMuslim-zhinji.
Zviito zvake zvakadaro zvakashorwa naTrudeau uye Emmanuel Macron (France Mutungamiriri) anosemesa pfungwa yechirambidzo chekufamba.
Kusawirirana pakati paTrump naTrudeau kwakamanikidza VaTrump kuti vasiye musangano waJune G-7 pamberi pekutarisirwa.
Kune rimwe divi, Trudeau akatora matanho nekukurumidza kuzviito zvekudzorera zvemasikati kupokana nehurongwa hwaTrump muna Chikunguru gore rimwe chetero.
Chokwadi # 3: Kukakavara kwaJustin Trudeau:
Mutungamiriri wedu weCanada akasangana nemakakatanwa akati wandei panguva yake yezvematongerwo enyika. Imwe yenyanya kukakavara mamiriro iOiri Pipeline Gakava.
Mushure mekubvumidzwa kwekuwedzera kweiyo Kinder Morgan Trans Mountain chirongwa, vazhinji vezvematongerwo enyika vabatsiri nevavengi zvakafanana vakasimudza manzwi avo vachipokana nekutenderwa naTrudeau.
Iyo purojekiti inosanganisira kuvaka kwepombi iyo yaizoendesa jecha remafuta kubva kuAlberta kuenda kuchiteshi cheBritish Columbia.
Achitaura pakuratidzira kwakasimudzwa achipokana naye, Trudeau akatsanangura kuti danho rake rakaringana nesainzi uye harizotyisidzi kuchengetedzeka kwenzvimbo.
Chokwadi # 4: Chitendero chaJustin Trudeau:
Ivo baba vaTrudeau vagara vari vaKaturike amai vake vari muAnglican Christian. Nekudaro, amai vaTrudeau vakazo tendeukira kuKaturike mushure mekuroora kwake kuna baba vake.
Nekudaro, mutungamiriri wechidiki akakwidziridzwa mukutenda kwechiKaturike. Ndosaka iye nemukadzi wake vakabatanidzwa pamwe chete muwanano kuMontreal's Sainte-Madeleine d'Outremont Church.
Chokwadi # 5: Tattoo yaJustin Trudeau:
Kupfuura zvaunogona kufungidzira, gurukota redu reCanada rakatemerwa nyora paruoko rweruboshwe. Iyo tattoo ine runyorwa rwepasi iro rine Haida gunguo rakanyora inki kutenderedza.
Paaitaura nezvetatoo yake, akaburitsa pachena kuti gunguo rinomiririra vanhu vemo venharaunda yeHaida Gwaii muBritish Columbia.
Tarira! Nyora yake yakanyatsoiswa ink paruoko rwake rweruboshwe.
Pazasi pane wiki zivo base yaJustin Trudeau. Tafura yacho ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi
Zita rizere: Justin Pierre James Trudeau
Nick Zita: Potato diki
Zuva rekuzvarwa: 25th December 1971
Nzvimbo yekuzvarirwa: Ottawa Civic Chipatara, Canada
Baba: Joseph Philippe Pierre Trudeau
Amai: Margaret Joan Trudeau
Vanun'una: Alexandre Trudeau naMichel Trudeau (hama)
Sarah Elizabeth Coyne, Kyle, naAlicia Kemper (Hafu-Vanin'ina)
Mukadzi: Sophie Gregoire
Vana: Ella-Grace Margaret, Hadrien Grégoire, uye Xavier James Trudeau
Net Worth: $ Miriyoni 13
Hobbies: Snowboarding, tsiva, bungee kusvetuka, uye chena mvura rafting
Ethnicity: Scottish neFrance yekuCanada dzinza
6 ′ 2 ″ - nemakumbo
Zvakaitwa naTrudeau zvakatiratidza kuti kuva akatendeka muzvinhu zvidiki isuwo rekubudirira kukuru.
Sezvo isu takaona kusvika ikozvino muHupenyu Hwake Nhau, isu tinofanirwa kushingairira mune yega yega yedu yekuyedza nekuti isu hatizive kwazvinozotisvitsa mune ramangwana. Hazvishamisi, zvinowanzotaurwa; Usaregeredza mazuva ekutanga kwako kudiki.
Ndatenda nekuverenga kwaJustin Trudeau Yemwana Nhau uye Biography. Ndichiri kuisa Bio iyi takaona kuti takatarisira kururamisa uye kururamisa mune ruzivo rwakapihwa.
Nekudaro, kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chisiri chakanaka muchinyorwa chino, nemutsa Taura nesu. Kana isu tisiyei mhinduro mubhodhi rezasi pazasi pemifungo yako paHupenyu hwaJustin Trudeau.